Ukuhlanganiswa nokuhlaziywa kwephrinta ye-3D ku-KIT BQ Hephestos | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Kule ndatshana sizochaza ukuthi kwenzekeni isipiliyoni sethu sokufaka iphrinta ye-3D ku-KIT BQ HEPHESTOS. Le phrinta eyethulwe ngumkhiqizi ekupheleni konyaka wezi-2016 ukubuyekeza imodeli ekhishwe ngo-2014. Yize iqhubeka nokukhuthazwa yimodeli evela emphakathini weRepRap kufaka phakathi i-elektroniki eyenziwe futhi yaklanywa yi-BQ futhi ukwakhiwa kwazo zonke izingxenye ezifakiwe kubukezelwe ukwenza ngcono ukuzinza nokunemba kokuphrinta.
Ngemuva kokubuka izinkathi eziningana zikaMcGyver ukuze sizikhuthaze siye salokotha ukufaka iphrinta ku-KIT futhi sizochaza ngezinwele, izimpawu nangesifinyezo sevidiyo somhlangano ukuthi isipiliyoni sinjani
2 I-Unboxing kanye nomhlangano wephrinta ye-3D ku-KIT BQ Hephestos
2.1 I-BQ ifuna ukuguqula amaphrinta we-KIT afana ne-Ikea aguqule ifenisha
2.2 Isikhathi esisetshenziselwe ukuhlangana
2.3 Linganisa ipulatifomu yokwakha
3 Izici zobuchwepheshe nokucaciswa kwephrinta ye-3D ku-KIT BQ Hephestos
4 Ezinye izici zobuchwepheshe
5 Usuku nosuku ngephrinta ye-3D ku-KIT BQ Hephestos
6 Ithimba elithandwayo nomphakathi woMenzi
7.1 Intengo nokusatshalaliswa
Ngaphandle kokuthi kusukela ekuqaleni kokuthengiswa kwayo, ukuthuthuka okuningi kuvele emakethe ukuthi imodeli ye-BQ ayifaki, ukwehliswa kwakamuva kwe-RRP kubuyisela leli qembu emuva ekukhanyeni. Uma sandisa isabelomali sethu singathola imodeli efaka umbhede oshisayo futhi sinakho futhi ihlaziyiwe kule bhulogi noma singathenga ukuthuthukiswa "kombhede oshisayo" lowo BQ izimakethe kuwebhusayithi yayo.
I-Unboxing kanye nomhlangano wephrinta ye-3D ku-KIT BQ Hephestos
Ngokungafani nezinye izindatshana lapho sibuyekeze khona amaphrinta. Ngaphambi kokuqala ukubuyekeza izici zobuchwepheshe bemishini, sizogxila ekuchazeni ukuthi ulwazi lokuhlanganisa iphrinta lube kanjani.
I-BQ ifuna ukuguqula amaphrinta we-KIT afana ne-Ikea aguqule ifenisha
Iphrinta iyafika igcwele iphakethe elihlangene nelilula ukuthutha kunoma yiliphi ibhizinisi. Yiqembu esingalithola kalula ezitolo ezinkulu kanye nasezitolo ezisebenza ngogesi, sizokwazi ukuyithola cishe kunoma yiliphi idolobha ezweni lethu ngaphandle kokuya esitolo esikhethekile okungaba nzima ukusithola. Futhi kuyimodeli emakethwa online ngamawebhusayithi adumile futhi aziwayo.
Uma sivula ibhokisi sithola cishe a Izingcezu eziyikhulu zihlelwe ezitezi ezi-2. Ukubona izingcezu eziningi ezi-odolwe kahle kusabisa kancane, kepha sisheshe sayithola inhlukano futhi siyabona ukuthi esinyathelweni ngasinye kunemininingwane ephelele yezingcezu okufanele zisetshenziswe nokuthi lezi zibalwe ngokuphelele ukuze kungabikho ukudideka. Kuyasikhumbuza (ukonga amabanga) kumanyuwali ukuhlanganisa ifenisha ye- Ikea.
Ukwesaba kwesibili kulapho sivula ibhokisi eliqukethe yonke i-hardware, inani lamantongomane namabhawodi esizogcina sisebenzisa liba likhulu. Ngebhukwana isifanekiso sifakiwe nawo wonke amantongomane osayizi wokuphila namabhawodi wokuhlonza okusheshayo. Ngalo mqondo, kungasiza kakhulu uma izikhwama lapho uhlobo ngalunye luhlukaniswe khona zazibhalwe.
Ake siqale ukusebenza, nansi isixhumanisi sevidiyo ukuze uzitholele umqondo wokuthi kubiza ini okuxakile njengami ukuhlanganisa ikhithi enjengale:
Emhlanganweni sihlangabezane nezinkinga ezithile ezincane esikwazile ukuzixazulula endizeni. Sibanikeza imininingwane ngezansi:
Ezinye zezingxenye eziphrintiwe azihambelani nemilimitha ngezinduku nokunye okunjalo futhi kufanele senze okuthile. Lokhu kubeka engcupheni yokuqhekeka kwalezi zingxenye eziphrintiwe.
Izingcezu eziningi zokuqala zinemigodi lapho kufanele ulingane amantongomane usebenzisa i-soldering iron. Kule mininingwane asikatholi okusetshenziswayo kumanyuwali womenzi. Kepha uma singabona kuqanjwe kumavidiyo umenzi anawo kwingosi UDIWO
Ikhithi ifaka zonke izinkinobho zika-Allen ezidingekayo ekuhlanganeni nase-spanner. Lapho bekhama ngenkani sizodinga ama-wrenches ama-2.
Amantongomane ahlanganisa ukufakwa okuvundlile nokumile awakwazi ukuqiniswa ngesikhiye esifakwe ebhokisini. Sidinga enkulu.
El bonisa izintambo ebhodini electronic kuyinto kuchaze ngendlela exakayo kumanuwali. Bekufanele sixhume ngqo okuphambene nokuthi kubonakala kanjani kithi ukuthi kukhombisa kumanuwali. Kungaba ukuhlakanipha ukusebenzisa isixhumi esivumela kuphela ukuthi sisetshenziswe ngendlela efanele.
Umvikeli weHotEnd akasebenzi futhi uyacasula lapho usebenzisa iphrinta, sigcine sisisusile.
El Uhlaka mpo yinsimbi ngesineke ngezwi elimpunga. Kwelinye ikona ungakwazi ukusika upende ngaphandle kokuthinta ukuphrinta nganoma iyiphi indlela.
Isikhathi esisetshenziselwe ukuhlangana
Sisebenzise Amaseshini ama-3 cishe amahora amabili nohhafu. Sihambe kancane, sihlola isinyathelo ngasinye futhi sibheka ukuthi ukurekhodwa kwenqubo akumi yini. Ngamagama jikelele i-montage kwabonakala kithi elula kepha ende. Ibhukwana lichazwe kahle, futhi umenzi walo uneqoqo lamavidiyo kwiwebhusayithi yakhe elinemininingwane yenqubo yonke.
Ezingeni lokuklama, isethi ibonakala njengeqembu elihle, ngaphandle kokuphela komjaho.. Lapho imishini isihlanganiswe ngokugcwele, le mishini ayikhubazeki futhi kuzofanele sazi ukuthi lapho siphatha leyo mishini abasishukumisi.
Isisekelo sokuphrinta ilinganiswe ngamaphuzu amane ngezikulufo ezine, Kunconywa ukuyilinganisa izikhathi ezimbalwa zilandelana ngaphambi kokuqala ukuphrinta.
El I-BQ ayithengisi ikhithi ukuvuselelwa kwe- ukuzilinganiselaKodwa-ke, kulezi zinkundla zisize abasebenzisi abaningana ukuguqula i-firmware ukuze basebenzise izinto ezidingekayo ukwenza lo msebenzi.
Izici zobuchwepheshe nokucaciswa kwephrinta ye-3D ku-KIT BQ Hephestos
Iphrinta iyisibonelo esisebenza kahle futhi esazi ukuthi ungaguga kanjani ngokufanele. Inesinqumo se- 60 micron Z ungqimba kufana nabaphrinta abaningi banamuhla futhi kwanele imisebenzi eminingi yokuphrinta esingayenza. Ngokufaka i- Uhlaka lwensimbi isisindo sayo siphakeme ngandlela thize kunamanye amaphrinta afanayo, noma kunjalo I-13 Kg Akusona isisindo eseqile futhi kuzosivumela ukuthi sisisuse ngokunethezeka uma sisidinga.
El Indawo yokuphrinta engu-215x200x180 Ilungele ukuphrinta okuningi, noma ngabe uma siyidinga singathola isisekelo esibanzi.
La isivinini sokuphrinta ngu-100mm / s kancane kancane uma kuqhathaniswa nesivinini samaphrinta anamuhla.
I-extruder esetshenziswe kule phrinta izosivumela ukuthi sisebenzise intambo I-PLA nokunye okunjalo njengezinkuni noma imicu yensimbi. Iphinde iphendule kahle nge imicu evumelana nezimo kepha asikwazi ukusebenzisa imicu enamazinga okushisa aphezulu okuxuba noma ukunamathela okungalungile, ngoba iphrinta ayihlanganisi umbhede oshisayo. Kokubili umbhede oshisayo kanye ne-extruder yephrinta entsha ye-BQ Hephestos 2 yizinsiza esingazithenga ngokuhlukile.
El inqola ye-extrusion inokubukeka okuhlangene noma zonke izixhumi zezintambo zikhulu futhi zitholakala endaweni efanayo. I- Amabhande ama-eksisi ama-X zinamathele ngokuqinile futhi azikathukululi nganoma yisiphi isikhathi.
Njengakwezinye amaphrinta esike sazihlaziya phambilini siphuthelwa yiswishi ye-ON / OFF. Njengesixazululo sesikhashana singahlala sinqamula intambo kunikezelo lwangaphandle lwamandla njengoba inokwakhiwa okuqinile kakhulu.
Sibhekene nephrinta engasebenza ngokuzimela ngokunyathelisa kusuka ku-SD noma ixhumeke kwi-PC ngekhebula le-USB. Kuzona zombili lezi zimo wenza umsebenzi wawo ngokuphelele. Uma sifuna iqembu nge ukuxhumeka kwe-wifi singahlala njalo senza imali encane eyengeziwe futhi sifake iseva I-Octoprint ku-Raspberry Pi 3 (imodeli efaka i-wifi njengokujwayelekile). Siyihlolile futhi isebenza kahle.
Ukunamathisela izinto sisebenzise i-CURA, uhlelo esiluthanda kakhulu futhi oluhambisana ngokuphelele nale phrinta. Ngemuva kwalokho kufanele sigcine amafayela we-GCODE ngemiklamo yethu ekhadini le-SD esilifaka kuphrinta. I-Kit ayifaki noma yiliphi ikhadi le-SD
Isifundi sekhadi le-SD sihlanganiswe nesibonisi futhi siphezulu kwiphrinta okwenza kube lula ukuxhuma nokunqamula amakhadi. I- isibonisi sinokukhanya okuhle kakhulu kepha simangele ukuthi isondo lokulawula alifikanga nopulasitiki.
Usuku nosuku ngephrinta ye-3D ku-KIT BQ Hephestos
Isibonisi sephrinta sisikhombisa ulwazi ngesimo semibhalo, njengakwezinye izikhathi ezedlule sidinga ukubona isikhathi esisele sokuqeda umsebenzi uqhubeka. Akuyona iphrinta enomsindo ikakhulukazi, ngakho-ke singasebenza egumbini elilodwa nemishini ngaphandle kokubeka impilo yethu yengqondo engcupheni.
Ukuphrinta kune- qeda kahle futhi ukuthembeka okuhle kugcinwa futhi isilinganiso sephutha eliphansi ngemuva kocezu.
Ngemuva kokuphrinta izingcezu ezingaphezu kwamashumi amathathu sibuyekeze wonke amantongomane nezinyunyana ngaphandle kokuthola akukho okuye kwaba okuxekethile noma okuwohlokile ngokusetshenziswa okukhulu lapho okomshini kufakwa khona.
Ithimba elithandwayo nomphakathi woMenzi
Akungabazeki ukuthi enye yezinto ezisithinte kakhulu ngaleli qembu yilona imininingwane enkulu kakhulu, ukuguqulwa kanye nezinsiza yini esikwazile ukuyithola online ngenhloso yokuthuthukisa le phrinta.
Lesi yisici esibaluleke kakhulu uma sifuna ukuthi iphrinta yethu iguquke ukuze ithuthukise ukusebenza kwayo. Ukusuka kuzinzwa zokuzikhulisa kuya ekuthuthukisweni kwezingxenye ezihlanganayo ukunika umhlangano ukuzinza okwengeziwe. Nomaphi lapho kwenzeka ukuthi sibheke khona, sizothola ulwazi mayelana nephrinta; into ehlukile , ezithangamini ezisemthethweni e Youtube …. Akunandaba ukuthi sibheka kuphi, sizohlala sithola abasebenzisi abaningi nale mishini. Ngenxa yokuthandwa kwale phrinta sizoba kakhulu fkulula ukuthola ukuguqulwa okuhlukile okuvivinywe inani elikhulu labenzi.
Siphrinte futhi sahlanganisa ukuguqulwa okuningana e-PLA lokho kusivumele ukuthi sithuthukise kalula ukubonakala kwemishini. Sishintshanise ngeziqeshana zehhovisi ezinye izingxenye zenzelwe ngqo ukubamba ingilazi lapho siphrinta khona, sengeze i- umhlahlandlela wentambo, sifake i- inkinobho ekulawuleni isibonisi futhi sithuthukile izisekelo zezinduku eziphethe ukunyakaza eduze kwe-axis Z.
Siphinde sihlele ukuphrinta ibhokisi lokuhlobisa isibonisi bese sengeza ukuxhaswa kwekhamera yewebhu. Ku-Octoprint singangeza ukusakaza ngamamodeli athile we-webcam futhi siqaphele okuvelayo kwethu ukuthi siseduze kwephrinta noma amakhilomitha amaningi kude.
Yize kuliqiniso ukuthi ubulula bemodeli buvezwa lapho kubuyekezwa ezinye zezici zobuchwepheshe, iphrinta ye-3D ku-KIT BQ Hephestos iyi inketho enhle kakhulu yokuzethula ezweni lokuphrinta kwe-3D. Ngakolunye uhlangothi sineqembu eline- intengo yokuqukethwe lokho kuzosivumela ukuthi siqale ukuphrinta ngaphandle kokutshala imali okukhulu kakhulu. Ngakolunye uhlangothi, ngibe yi- Iphrinta ye-3D tan ethandwa Noma iyiphi inkinga esinayo ngephrinta ingatholakala ixazululwe kwisithangami esisodwa noma kwesinye. Ngaphezu kwalokho, iqembu linezinketho ezimbalwa zokunweba ezizosivumela ukuthi siguquke futhi sithuthuke esikhathini esiphakathi. Sifuna iBQ ithuthuke i-kit ampiation entsha efaka ukuthi kungenzeka ukuzilinganisela. Lokhu kungaba yindlela elula yokuthuthukisa nokunothisa ulwazi lomsebenzisi
Kuyimishini ethandwa kakhulu esingayithola cishe kunoma iyiphi inxanxathela yezitolo. Ngemuva kokubuyekezwa kwakamuva kwe-RRP singathola le phrinta ngefayela le- inani le- € 499
Ithimba ngokusekelwa okukhulu okuvela emphakathini wabenzi
Kulula ukuthola imishini ezitolo
Amantongomane kufanele afakwe ezingxenyeni ngensimbi ye-soldering
Akubandakanyi umbhede oshisayo
Akubandakanyi ukuzilinganisela kwakho
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » Ukuphrinta kwe-3D » Ukuhlanganiswa nokuhlaziywa kwephrinta ye-3D ku-KIT BQ Hephestos
I-PC Challenge, inselelo entsha ye-Raspberry Pi